Quote 200+ Quotes Waxaa qoray qorayaasha aan magaca lahayn ee 2020 - Quotes Pedia
307 xigasho iyo odhaah
Noloshu waa mid aan la saadaalin karin. Marna ma ogaan kartid waxa dhaca daqiiqada ugu dambeysa. Xaaladda noocaas ah, waxaan had iyo jeer daba joognaa raadinta waxyaabo muhiim u ah nolosheena.
Waqtiyada qaarkood, waxaan dareemeynaa hoos u dhac iyo niyad jab. Waxoogaa yar oo dhiirrigelin ah ayaa had iyo jeer sameyn kara yaabyo xaaladaha noocaas ah. Sidaas darteed, Qoraayaasha aan lagaran had iyo jeer waxay u joogaan inay ku siiyaan ilahaas yar ee dhiiri galinta iyo dhiirigalinta si aadan u dareemin hoos u dhac ama niyad jab fursad kasta.
Sababta ugu weyn ee ay qorayaashani ula yimaadeen fahamka ah inay qoraan fikradooda ma aha ujeeddooyin kasta oo sumcad ama magac iyo caannimo ah, laakiin waxay keliya u samaynayaan ujeeddada ay kuu leeyihiin inay kugu siiyaan waxoogaa gariir wanaagsan oo wanaagsan si aad u awoodid naftaada ka soo bixi dhacdada xiisaha leh oo aad hesho tamar aad ku qabato wax cusub oo hal-abuurnimo habkaaga.
Kuwani Xigashooyin aan la aqoonsan markasta ka hadal faafinta jaceylka naftaada. Jacaylku waa tamar wanaagsan oo khafiifin karta xitaa xumaanta tan quduuska ah.
Adduunkan waxaa ka buuxa nacayb iyo murugo. Jacaylku wuxuu leeyahay awood bogsiineed oo uu ku tirtiro dhammaan fikradaha xun ee shaqsi kastaa isla markaana uu qofkaasi ku buuxiyo karti uu ugu rogo waxyaabo wanaagsan oo cusub.
Haddii aad runtii rabto inaad qof beddesho oo aad naftaada wanaagsan ka soo saarto isaga ama iyada, waxay u badan tahay in taasi ku dhimatay qofkaas sannado gudahood, waxa kaliya ee aad waligaa sameyn karto waa inaad qofkaas jeceshahay shuruud la'aan.
Jacaylku wuxuu leeyahay awood aad u weyn si uu u bogsiiyo qof kasta, waana ruuxaas beddeli kara ujeeddada iyo ujeedka shaqsi waligiis weligiis. Badanaa waxaan u muuqanaa kuwo lumay, jacaylkuna waa tamarta kaliya ee kugu celin kara dariiqaaga mar labaad.
Kuwani qoraalo aan lagaran waa halkaan kugu dhiirrigeliya xigashooyinka wanaagsan, waxaan ku bari doonaa muhiimadda jacaylka iyo dhiirrigelinta, waxayna kaa caawineysaa inaad mar kale kacdo xitaa markii aad boqol jeer ku guul darreysatay. Weligaa ma ogaan kartid in waqtigaan 101aad uu kanaga adiga kuu kuu yahay yahay!
In hore loo socdo marxaladda dhibaatada waxay noqon kartaa wax adag laakiin dadka ka adkaan kara cabsidooda iyo ...
Ha isku dayin inaad dadka bedesho; kaliya jeclaada iyaga. Jacaylku waa waxa na beddela. - Qarsoodi
Kulligeen isku mid ayaynu nahay laakiin wali waa isku mid. Kulligeen waxaan haysanaa wax na kala duwanaada…
Nolosha, keligeed ayaanu iska nimaadnaa oo kelinaa iska tagnaa. Sida noloshu usii socoto, waxaan samaynaa xiriiro badan. Qaar badan oo ka mid ah ...
Nolosha, dabeecaddu waxyaabo badan ayey ku jirtaa. Waa aragtideena iyo ficilkeena qeexaya cidda aan nahay. Hab dhaqankeena…
Erayaduhu way madhan yihiin iyada oo aan ficil la samayn. Waxaan u fadhiisan karnaa oo ka fikirnaa waxyaabaha kaladuwan ee aan rabno inaan…
Nolosha, waxaad la kulmi kartaa xaalado kaladuwan marka aad dareemayso inaad quusanayso. Qof bisil oo caqli leh…
Toos maalin walba oo nolosha mahadnaq. - Qarsoodi
Qof caqli leh ayaa yaqaan waxa la yiraahdo. Qofka caqliga leh wuu ogyahay inuu dhaho iyo in kale. - Qarsoodi
Qofka caqliga leh waa qof yaqaan waxa la dhihi karo xaalad kastoo jirta. Khibrad uu leeyahay…
Noloshu waligeed ma fiicna. Waxaad lahaan doontaa sababo badan oo aad ku jebiso, aad dareento jahwareer, iyo oohin. Sikastaba,…
Noloshu aad bay u macaan tahay. Murugo ayey ku qaadataa in la ogaado waxa farxaddu tahay, shanqar si loo aamuso aamusnaanta, iyo maqnaanshaha…
Bini’aadamka waa noocyo aad u hammi badan dhulka, sidoo kale waa kuwo aad u caajis badan. Dhamaanteen waxaan guul u rajeyneynaa…
Guul darradu waa tiirka guusha. Guuldarrooyin la'aan, way kugu adkaan doontaa inaad ku raaxaysato dhadhanka…
Sii wad. Wax kasta oo aad u baahan tahay ayaa kuu imaan doona waqtiga ugu habboon. - Qarsoodi
Waa muhiim in la sii wado. Marar badan, si sax ah ayaan u qaadnaa markii aan nimid…
Jacaylku maahan waxaad dhahdo. Jacaylku waa waxa aad samayso. - Qarsoodi
Jacaylku waa mid ka mid ah shucuurta ugu sixirka badan ee bini-aadamku abid soo maray. Jacaylka waxyaabaha kujira dhamaan waxyaabaha loo baahan yahay…